Magaala Dakota county dhukubni coronavirus baay’e dabalaa jira | KWIT
Kunis coronavirusin kan state Iowa keessati qabame nama 11,500 keessa harka 13% oliidha. Guyyaa Jimaata nama du’ee baay’ee yoo ta’u waliigalatti namni du’e Iowa keessati 243 gahee jira.
(Ammara jalqabe manni fayyaa Dakota County odeefano virus kan gad dhiftu guyaa Wiyxata, Harbaa fi Jum’aa sa’aati booda qofaadha.)
Itti gaafataman seeraa mana fayyaa akka jedhetti kutaa Iowa magaala Woodbury keessatti hark 2 keesa harka 1 akka qoranno godhan murtesan.
Guyyaa Jimaata oduu conference irratti manni fayyaa Sioux land akka jedhe jiraatota harka 26 keesa harki tokko qoratamuun himan.
(Magaala Woodbury county qorannoodhan state irra 4th jirti namni 4,900 qorano godhani jiru.
Qorannoo maraa keessati harki 3ffaa virus qabachu himan.)
Ittii gaafatamtonni naanicha dhukubsatootaf malattoo akkami akka mul’atu gorsa kenenifu jiru. Namootin malatoowan xixiqa kan akka dhukubi mataa, dhukubi qamaa fi dhukubi qonqoo yoo kan arganii mana taa’uu akka qaban himan.
Itti aanan man fayyaa Sioux land akka jedheti dhukubsatoni garii qarqaarsa haakima kan argatan herga yeroo dheeraf eegattan bodaa jedhan.
Warren oduu himan maalif namni yeroo baay’ee eega gargaarsa fayya argachuf jedhani argachuu hindandenee, akkasumaas kanaf virus babal’atta wayta gaafatan waan nama himuun seeraan ala jedhani didani.
Long-term facilities kan magaala Woodbury county keessati argamu ammati rakkini hin jiruu akka magaalawan birooti jedhan.